စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစီမံကိန်းများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ | Martech Zone
သောကြာနေ့, မတ်လ 2, 2012 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအများစုသည်၎င်းတို့ onboard တွင်ပြန်လည်ပညာရေးအနည်းငယ်လိုအပ်သည်။ သူတို့ကကုန်စုံဆိုင်သို့ ၀ ယ်သည်လိုစျေးကွက်ရှာဖွေသူများနှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်လေ့ရှိသည်။ သူတို့က itemize ချင်တယ်, စျေးနှုန်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်း။ ကျနော်တို့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပါတယ် စီမံကိန်းများ အတိတ်ကာလကငါတို့တကယ်သူတို့နဲ့ဝေးဝေးနေတယ်။ အကြိမ်ကြိမ်ထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်ရန်စီမံကိန်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့မသတ်မှတ်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်သဘောတူညီမှုမှဝေးကွာသွားကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အစားထိုးခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်သည်။
ပြနာမှာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ သင်ဆာဗာတစ်ခုဝယ်ယူနေခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်ရလဒ်များအပေါ် အခြေခံ၍ နည်းဗျူဟာတစ်ခုကိုပုံဖော်နေပါတယ်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည် အဆင်သင့်၊ မီး၊ မဟာဗျူဟာ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစီမံကိန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနားလည်ရန်အတွက်ရလဒ်များကိုသင်စတင်ပြီးစတင်မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ငါကဒီ site ဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းတစ်ခု, အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကို, ဒါမှမဟုတ်ကြောင့်ပဲရဲ့ဂရုမစိုက်ပါဘူး infographic ဒီဇိုင်း.
ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် infographics ကိုဒီဇိုင်းဆွဲသောအခါဖောက်သည်အားအနုပညာအလုပ်နှင့် layout ကိုပြသရန်အမှန်တကယ်မူကြမ်းပါသောဒီဇိုင်းကိုတင်ပြသည်။ သူတို့ကဒါကိုကြိုက်ရင်၊ မှန်ကန်သောသတင်းကိုပြသနိုင်ရန်သေချာစေရန်အကြောင်းအရာနှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲကြားနေရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝလက်ခံပြီးသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များကိုအတည်ပြုပြီးမှတ်တမ်းတင်မှမှသာကျွန်ုပ်တို့သည်အချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုထုတ်ပြန်နိုင်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တိုင်းတွင်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရှုံ့ချသည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေသတွင်း၌စတင်မည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်သက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာရန်၊ အဆင်သင့်၊ မီး၊.
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး နှင့်သူတို့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စွာလုပ်ဆောင်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်လိမ့်မည် ဘယ်တော့မှ သတ်သတ်မှတ်မှတ်သော့ချက်စာလုံးများအတွက်စာချုပ်ချုပ်ရန်သူတို့ကိုပြောပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပလက်ဖောင်းနှင့်အကြောင်းအရာများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။အဆင်သင့်), ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် site ကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်နည်းဗျူဟာ execute (မီး), ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် site ကိုမည်သို့ရည်ညွှန်းသည်နှင့်မည်သည့်သော့ချက်စာလုံးများကိုအကောင်းဆုံးပြောင်းလဲနေကြသည်ကိုလေ့လာသည်နှင့်သူတို့အဘို့အကြှနျုပျတို့ကိုပိုကောင်းအောင် (ရည်ရွယ်ချက်).
ကျနော်တို့သတ်မှတ်ထားသောရက်စွဲများကိုချစ်ပေမယ့်သူတို့ကိုလာမယ့် client ကိုနီးပါးနှင့်အတူသွားနှင့်ကြည့်ရှုပါ။ ဖောက်သည်အများစုကအပိုဆောင်းအပြောင်းအလဲများနှင့်ညှိနှိုင်းမှုများဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ကိုသတိပြုမိသောကြောင့်ပစ်မှတ်ထားသည့်နေ့ရက်သည်ပန်းတိုင်မဟုတ်ချေ။ အချို့သောဖောက်သည်များကမူရက်စွဲကိုနှိပ်လိုကြသည်။ အရင်းအမြစ်များနှင့်အချိန်မီမရှိကြပါသို့မဟုတ်အပိုဆောင်းအပြောင်းအလဲများကိုတောင်းခံနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်စျေးကွက်အပြောင်းအလဲများနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသည်ဒီဇိုင်းပုံစံပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ အခြားဖောက်သည်များအနေဖြင့်“ ဒီဆက်နွယ်မှုမှပိုက်ဆံထပ်မံထုတ်ယူရန်ကြိုးစားရန်အရောင်းအ ၀ ယ်မှထွက်ခွာသွားကြစို့” … ol ကိုလက်လျှော့သည်။
ကောင်းမွန်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်သည့်သော့ချက်သည်လျင်မြန်စွာမြန်ဆန်စွာလှုပ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ အဆင်သင့်၊ မီး၊ အဆင်သင့်၊ မီး၊ အဆင်သင့်၊ မီး၊ အပိုင်းအစများအားလုံးရွေ့လျားနေသည်ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကိုရရှိရန်အတွက်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောချိန်ခွင်လျှာလိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ရှေ့မှောက်နောက်သို့နည်းဗျူဟာတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပါကအရာရာသည်မှားယွင်းနေသောအချိန်တွင်ရလဒ်ကိုချိန်ညှိနိုင်ခြင်းမရှိဘဲသင်၏အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံအားလုံးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။
B2B ပရိုဖိုင်းနှင့် Mintigo နှင့်အတူရှာဖွေရေး